Tsara tarehy tokoa ny hazo "aravaha" ("tremble", karazan-kazo maniry amoron'ny renirano sy rano mikoriana, tany Syria sy Palestina). Mahatratra 15 hatramin'ny 30 metatra ny haavony. Mampaniry azy tsara ny toetrandro mangatsiaka, sy ny lohataona tsy dia mafana loatra. Ampiasaina amin'ny fanamboarana afokasoka sy taratasy ny hazo aravaha. Matetika ny diera sy ny biby hafa no mihinana ny hazo aravaha tanora mandritra ny ririnina mamirifiry satria be otrikaina mahavelona ny hoditr'izany hazo izany. Mila tara-masoandro be dia be ny hazo aravaha, ary maniry - mandritra ny taona - na amin'ny ririnina aza, ka tonga sakafon'ny biby samihafa mandritra io tonontaona io.
Fantatra kokoa amin'ny fananany faka lehibe indrindra noho ny zava-maniry rehetra ny aravaha. Misandrahaka any ambanin'ny tany amin'ny alalan'ireo vololon-kazo ny fakany, ary miitatra haingana tokoa izany. Mety hahatratra 150 taona ny fahaveloman'ny hazo aravaha anankiray, an'arivo taona kosa no hahaveloman'ny fakany any ambanin'ny tany.
Mandritra ny lesona amin'ity herinandro ity no handinihantsika ireo faka mahatonga antsika tsy hanam-pitsaharana. Zavatra maro no manakana antsika tsy hahita fitsaharana marina ao amin'i Jesôsy. Miseho miharihary ny sasany amin'izy ireny ka tsy mila fandinihana ela loatra, ny hafa kosa mety tsy ho hitantsika avy hatrany, tahaka ny fakan'ny hazo aravaha any ambanin'ny tany. Mety-tsy ho tsapantsika mandrakariva ny toetra sy ny zavatra ataontsika izay mampisaraka antsika amin'ny Mpamonjy.
Mitondra fampisarahana Jesôsy
Vitsy ihany no tia fifandirana; maniry fatratra filaminana sy fiadanana isika. Mampianatra momba ny fampihavanana sy famahana fifandirana aza isika any amin'ny fiangonana sy ireo sahan'asa iadidintsika.
Vakio ny Mat. 10:34-39. Inona ny hevitry ny tenin'i Jesôsy raha nanambara Izy fa tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra? Inona ny hevitr'izany, raha jerena ny maha -"Andrian'ny fiadanana" Azy (Isa. 9:5)?
Mahatalanjona ny teny nambaran'i Jesôsy ao amin'ny Mat. 10:34-39. Ilay Mpamonjy, izay tonga tety naka ny endriky ny zaza iray tsy maharo tena fa tsy mba toy ny mpanjaka mahery nohodidinin'ny mpiambina sangany, dia ilay nitory ny hitiavana ny namana sy ny fahavalo, no indro ankehitriny milaza amin'ireo mpanara-dia Azy fa mitondra fampisarahana sy fifandirana. Azo heverina fa nanontany tena ireo mpianany sy ny mpihaino Azy, tahaka antsika ihany koa, manao hoe: Ahoana no mampitombina izany?
Ny fahatokiana sy fanoloran-tena no lohahevi-dehiben'ny Mat. 10:35-39. Mampirisika ny mpihaino azy hanao safidy ho an'ny mandrakizay i Jesôsy raha namerina ny voalazan'ny Mika 7:6. Tokony ho tia sy hanaja ny ray aman-dreniny ny zanaka, fitakian'ny lalàna izay noraisin'i Mosesy teo an-tendrombohitra izany. Anisan'ny zavatra takin'Andriamanitra izany, kanefa raha manembantsembana ny fanoloran-tenan'ny mpihaino ho an'i Jesôsy izany dia mitaky fanapahan-kevitra hentitra. Tokony ho tia sy hikarakara ny zanany ny ray sy reny, kanefa mitaky fanapahan-kevitra hentitra izany raha toa apetraka eo alohan'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ampahatsiahivin'i Jesôsy antsika ao amin'io andininy io ny tokony hametrahana ny lohalaharana ho lohalaharana. Fehezanteny telo izay samy ahitana ny teny hoe "miendrika" no nanehoan'i Jesôsy izany safidy izany. Tsy miorina amin'ny fitandramena ambony na koa ny fandresena ny ota ny fahamendrehana, fa miorina amin'ny fifandraisana amin'i Jesôsy. Mendrika isika rehefa mifidy Azy ambonin'ny zavatra rehetra - ao anatin'izany ny ray sy renintsika, na koa ny zanatsika. Mifidy ny fahorian'ny hazo fijaliana isika ka manara-dia Azy.
"Faniriako lalina indrindra ny hahita ireo tanorantsika hanana ny toe-tsain'ny fivavahana marina, izay hitarika azy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka an'i Jesôsy . Mandrosoa, ry tanora mpianatr'i Kristy, izay fehezin'ny fitsipika sy mitaky fahadiovana sy fahamarinana. Hitari-dalana anao ny Mpamonjinao ho amin'ny toerana izay mifanaraka indrindra amin'ny talentanao sy hahafahanao manompo Azy indrindra."- TFC, b. 5, t. 87.
Misy fotoana izay tsy maintsy itondrantsika hazo fijaliana tsy miankina amin'ny safidintsika, vokatry ny safidintsika koa anefa izany indraindray. Na amin'itsy voalohany na ity farany. Inona ny fanalahidy hahafahana mitondra ny hazo fijaliana amim-pahatokiana?
Tahaka ny fakan'ilay hazo aravaha izay misandrahaka any ambanin'ny tany, ny fitiavan-tena dia anisan'ny faka iray lehibe antsoina hoe "fahotana", izay manakana antsika tsy hahita fitsaharana marina ao amin'i Jesôsy. Ny fitiavan-tena no fahotana toa mora miseho indrindra eo amin'ny fiainantsika, sa tsy izany? Toa mandeha ho azy tahaka ny fifohana rivotra ny fitiavan-tena ho an'ny ankamaroan'ny olona.
Vakio ny Lio. 12:13-21. Lazalazao ny amin'ny olana asongadina ao amin'io fanoharana nataon'i Jesôsy io. Moa ve tia tena ny olona ary manamaivana ny fanjakan'Andriamanitra raha toa mitsinjo sy manomana ny hoaviny? Raha tsy izany, na koa tsy voatery ho izany, nahoana ary i Jesôsy no nampitandrina antsika mikasika izany?
Ao amin'ny filazantsaran'i Lioka ihany no ahitana an'io fanoharana io, ho valin'ny fanontaniana napetraky ny olona iray tsy voatonona anarana izay nihaino an'i Jesôsy. Nametrahan'ity lehilahy ity fanontaniana mikasika ny lova i Jesôsy , namaly azy Izy ka nanda tsy ho mpitsara eo aminy sy ny rahalahiny. Nifidy ny hiresaka momba ny olana lehibe kokoa tao ambadik'izany Izy, tsy Inona izany fa ny fitiavan-tena. Nihady lalindalina kokoa Izy mba hanehoany ny faka lehibe iorenan'ny asa ataon'ny tsirairay....
Eritrereto ny fisehoan'ny fitiavan-tena eo amin'ny fiainanao. Inona ny fiantraikan'ny fitiavan-tena eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amin'ny vady aman-janakao, amin'ny mpianakavin'ny finoana, amin'ny mpiara-monina sy ny mpiara-miasa? Inona ny hevi-dehibe ambaran'ny Fil. 2:5-8?
Tsy nifantoka afa-tsy tamin'izay nilainy sy ny hambom-pony ilay lehilahy mpanankarena tao amin'ny fanoharan'i Jesôsy, hany ka hadinony ny nihevitra ny zavatry ny lanitra. Tsy ny hahazoana bebe kokoa na izay tsara kokoa hatrany no fototry ny fanjakan.'Andriamanitra. Natsidik'i Paoly tamintsika ny antony nanosika an'i-Jesôsy hisolo antsika.
Maneho ny ohatry ny tsy fitiavan-tena sy ny fanetren-tena ary ny fitiavana ny Fil. 2:5-8. Raha tsy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa no mitondra ny safidintsika sy izay ataontsika lahararn-pahamehana, dia hanitatra hatrany ny trano fitehirizantsika ety isika ka tsy hihary harena any an-danitra (Mat. 6:20).
Nahoana no mora tokoa ny hahalavo antsika ao anatin'ny faniriana harena sy fananana be dia be? Mila vola isika mba hivelomana, kanefa na toy ny ahoana izay ananantsika dia toy ny mila fanampin'izany hatrany isika, nahoana?
Mampahery sy mamelombelona hatrany ny fandinihana ny herinandro farany niasan'i Jesôsy teto an-tany, nialoha ny nanomboana Azy tamin'ny hazo fijaliana. Asehon'izany ihany koa ny fanaovan'ny olona zavatra iray na fitenenany tsy amim-piheverana, vokatry ny hambom-po sy ny tsy fananam-pitsaharana.
Vakio ny Lio. 22:14-30 ka saino ny fihetsehampon'i Jesôsy raha nandre ireo mpianany niady hevitra, nandritra ny fiaraha-misakafo farany, ny amin'izay hatao lehibe amin'izy ireo (Lio. 22:24). Nahoana ireo mpianatra no tsy nifantoka tamin'ity fotoan-dehibe ity fa nifantoka kosa tamin'ny fahalehibeazana araka ny olombelona?
Mahalana no hifanakalozantsika hevitra amin'ny hafa ny amin'izay lehibe indrindra ao amin'ny fiangonana, ny fianakaviana, na ny toeram-piasana misy antsika. Mety mieritreritra ny amin'izany imbetsaka tokoa isika, iza anefa no miresaka ny amin'izany mivantana?
Tsy vao izao no niresahan'ireto mpianatr'i Jesôsy ireto ny amin'izany. Milaza ny Mat. 18:1 fa efa nametraka fanontaniana mikasika izany tamin'i Jesôsy izy ireo, saingy tsy nataony mivantana izany: "Iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?" Lesona lehibe iray no tao anatin'ny valintenin'i Jesôsy tamin'izay. Niantso zazakely iray Izy ary nametraka azy ho eo afovoan'izy ireo. Nihiratra tamim-pahagagana ny mason'ireo mpianatra. Nilana fanazavana ny fihetsika nataon'i Jesôsy, ao amin'ny Mat. 18:3 no ahitana izany: "Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy miova hianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan' ny lanitra mihitsy hianareo."
Manan-danja lehibe ny fiovam-po raha tiana ny hahita fitsaharana marina ao amin'i Jesôsy. Miaiky isika fa mila fanampiana, ary mahatsapa fa tsy afaka miankina amin'ny tenantsika fa mila miantehitra amin'i Jesôsy. Miaina fanandramana iray isika, izay mampiova ny zavatra irintsika fatratra sy izay heverintsika ho manana tombambidy. Hoy i Jesôsy tamin'ny mpianany: Matokia Ahy ary miankina Amiko tahaka ity zaza ity. Ny tena fahalehibeazana marina dia ny famoizana ny zonareo ka handraisanareo ny zava-dehiben'ny fanjakan'Andriamanitra.
Indrisy anefa fa toy ny tsy mbola nianatra izany lesona izany ihany ireto mpianatra, na dia tamin'ny fotoana niarahan'i Jesôsy nisakafo taminy farany aza. Simban'ny fifandirany ilay fotoan'ny firaisana tonga lafatra izay tsy hiverina intsony.
Mbola izany ihany ve no niseho na dia teo aza ireo taona niarahany tamin'i Jesôsy, niarahany niasa taminy sy nihainoany Azy ary nianarany teo an-tongony? Ohatra iray mahonena maneho ny faharatsian'ny fon'olombelona izany! Raha jerena amin'ny lafiny iray tsara kokoa anefa, eritrereto ny fahasoavan'Andriamanitra izay eo mandrakariva, ka na dia teo aza ny resaka mampalahelo nifandiran'ireo mpianatra dia tsy namela azy amin'izao i Jesôsy.
Ny fibanjinana an'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana no fanafody lehibe itsaboana ny faniriana ny fanandratan-tena izay mora mahazo ny olombelona lavo rehetra, nahoana?
Ny mpihatsaravelatsihy dia olona izay miafina ao ambadiky ny toetra iray tsy maha-izy azy akory. Impito no amerenana io teny io ao amin'ny Mat. 23, tao amin'ny teny nataon'i Jesôsy izay nitenenany ampahibemaso ireo mpanora-dalana sy Fariseo, dia ireo lohan'ny mpitari-pivavahana jiosy (Mat. 23:13, 14, 15, 23, 25, 27, 29). Ny filazantsara dia maneho an'i Jesôsy manome famelan-keloka ho an'ireo mpijangajanga sy mpamory hetra, ireo vehivavy janga, eny na ireo mpamono olona koa aza, saingy tsy naneho famindrampo loatra tamin'ireo mpihatsaravelatsihy Izy (jereo ny Mat. 6:2, 5, 16; Mat. 7:5; Mat. 15:7-9; Mat. 22:18).
Vakio ny Mat. 23:1-13 ary mitanisà toetran'ny mpihatsaravelatsihy efatra nambaran'i Jesôsy.
Toetra efatra no nambaran'i Jesôsy ho toetran'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo. Teo amin'ny fivavahana jodaisma tamin'ny taonjato voalohany, dia ny Fariseo no ankolafy mpihazona ireo fombafombam-pivavahana rehetra. Liana tamin'ny fanarahana ny lalàna an-tsoratra sy am-bava izy ireo, ary naha-sarotiny azy ny fombafomba mikasika ny fahadiovana. Ny Sadoseo kosa no ankilany, vondrona mpitarika ahitana mpanan-karena maro izy ireo, ary matetika izy ireo no mpisorona. Niteny grika izy ireo ary havanana tamin'ny filôzôfia grika ihany koa; tsy nino ny fitsarana na ny fiainana aorian'ny fahafatesana ny Sadoseo. Azo antsoina hoe tia fahalalahana ireo sokajin'olona ireo. Samy nantsoin'i Jesôsy hoe mpihatsaravelatsihy ireo vondrona roa ireo.
Araka ny fihevitr'i Jesôsy, mpihetsaravelatsihy isika rehefa tsy manao araka izay lazaintsika, rehefa mametraka ny fivavahana ho enta-mavesatra ho an'ny hafa kanefa tsy mampihatra izany ho an'ny tenantsika, rehefa mitady sitraka amin'ny hafa noho ny hafanam-pontsika eo amin'ny fivavahana, ary rehefa mitaky voninahitra sy fankasitrahana izay an'ny Raintsika any an-danitra irery ihany.
Na manindrona sy mivantana toy ny ahoana aza anefa ny teny nataon'i Jesôsy tamin'ireo izay nantsoiny hoe mpihatsaravelatsihy dia feno fitiavana sy fiheverana azy ireo izany, eny-na dia nihatsaravelatsihy aza izy ireo.
"Ny fangorahan'Andriamanitra no hita taratra teo amin'ny endriky ny Zanak'Andriamanitra raha nampitaredretra ny fijeriny teo amin'ny tempoly sy teo amin'ny mpihaino Azy Izy. Niloa-bava Izy tamin'ny feo kendan'ny tebiteby lalina tao am-pony sy ny ngidin'ny ranomaso ka nanao hoe: `Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mpamono ny mpaminany, sy nitora-bato izay irahina ho aminao, impiry Aho no ta-hanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety hianareo!'"- IFM, tt. 662, 663.
Tsy voatery ho mpitarika ara-pivavahana vao manana ny toetra ratsin'ny fihatsarambelatsihy izay nomelohin'i Jesôsy eto, nahoana? Ahoana no hianarantsika mijery ny fihatsarambelatsihy tahaka izany eo amin'ny tenantsika sy hialantsika amin'izany?
Mamongotra ny tsy fitoniana
Vakio ny Jao. 14:1-6. Inona no azontsika atao, eo anivon'ny tsy fananantsika fitsaharana, mba tsy hahatonga ny fontsika halahelo? Inona ny fomba hihoarana ny fizarazarana, ny fitiavan-tena, ny hambom-po, ny fihatsarambelatsihy, ka hahitana fitsaharana marina?
Ao amin'i Jesôsy mandrakariva no hahafahana mandresy ny tsy fananam-pitsaharana, Izy no lalàna sy fahamarinana ary fiainana. Fantany ny lalàna tokony hizorana raha mivenjivenjy eto an'efitry ny tontolo rakotra haino aman-jery isika; satria Ilay Andriamanitra nanome ny lalàna no fahamarinana naseho vatana, ary ny Fanahiny no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra (Jao. 16:13). Raha malahelo, reraka, ana, marary sy kivy isika, Izy no fiainana, kanefa tsy fe fiainana fotsiny. Fiainana be dia be no nampanantenainy antsika (Jao. 10:10). Voafaokan'izany ny fonenantsika sy ny fiainana mandrakizay, kanefa koa mahasahana ny fahatsaran'ny fiainana eto izany. Azon'ny Mpamorona atao ny manome be dia be ary mihoatra noho izany aza, na dia amin'izao andro izao aza.
"Aza malahelo ny fonareo", fanasana ho antsika izany, mba hiaina anaty fanantenana fa hainy ny manandratra antsika ho amin'ny havoana raha mahatsiaro ho kivy isika. Rehefa mitolona amin'ny fahamaizinana sy ny ota isika dia Izy no hanatanteraka ny asa tsara ao anatintsika sady efa nanomboka izany rahateo (Fil. 1:6).
Na toy ny ahoana fisehon'ny toe-javatra (mety ho ratsy tokoa izany), banjino ny teny fikasana izay nomena tao amin'i Jesôsy . Manomana "toerana" ho antsika Izy, toerana izay hahafoana mandrakizay ny alahelontsika sy ny tsy fananana fitsaharana ary ny fahoriana. Izany no fanantenana nomena antsika ao amin'i Jesôsy Kristy, omena ny tsirairay avy amintsika izany, na iza isika na iza, na avy aiza ny fiaviantsika, na ratsy toy ny ahoana aza ny fiainantsika teo aloha na koa ankehitriny.
Ny zava-dehibe dia ny fanatonantsika an'Andriamanitra ao amin'ny fahalementsika, ao amin'ny alahelontsika, ao amin'ny faharavantsika, ao amin'ny fahalavoantsika, satria fantatsika fa mandray antsika Izy na dia eo aza izany rehetra izany. Izany no atao hoe fahasoavana. Izany no tokony hinoantsika fa efa nomena antsika izany satria nokatsahintsika tamim-pinoana.
Vakio ny Jer. 3:22. Inona no asain'Andriamanitra ataontsika, ary inona no hataony amintsika ho setrin'izany? Saino ny teny nataon'i Jesôsy : "ho avy indray [Aho] ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa." - Jao. 14:3.
Inona no ambaran'izany momba ny maha-zava-dehibe ny teny fikasana ny amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany? Ho antsika manokana, amin'ny maha-Advantista antsika (izay mahatakatra momba ny fahafatesana), nahoana no sarobidy tokoa ny teny fikasana ny amin'ny fiavin'i Kristy fanindroany?
"Tsy mety hisy fitomboana na fitondrana vokatra eo amin'ny fiainana mifantoka amin'ny tena. Raha nanaiky an'i Kristy ho Mpamonjin'ny tenanao ianao, dia tokony hanadio ny tenanao, ary hiezaka hanampy ny hafa. Resaho ny fitiavan' i Kristy, tantarao ny fahatsarany. Ataovy izay adidy rehetra mitranga. Ento ao am-ponao ny enta-mavesatry ny fanahy ary amin'ny fomba rehetra azon'ny herinao atao, dia tadiavo izay hamonjena ny very. Rehefa mandray ny Fanahin'i Kristy ianao - ny fanahin'ny fitiavana manadino ny tena sy miasa ho an'ny hafa - dia hitombo ianao ka hitondra voa. Ho masaka eo amin'ny toetra amam-panahinao ireo fahasoavan'ny Fanahy. Hihamatanjaka ny finoanao, hihalalina ny foto-pinoanao, ho tanteraka ny fitiavanao. Hampitaratra bebe kokoa hatrany ny fitoviana amin'i Kristy ianao eo amin'izay madio, ambony sy maha-te ho tia rehetra."- HF, t. 47.
Eo am-piatrehana ireo olana misy eo amin'ny samy mambran'ny fiangonana: "Raha avela miresaka mandritra ny ora maro ny roa tonta, tsy ny fotoana ihany no lanilany foana amin'izany, fa tsy maintsy mijanona mihaino azy ireo koa ireo mpanompon'Andriamanitra. Tsy milefitra eo ambanin'ny fahasoavana akory anefa ny fon'ny roa tonta. Raha mba nanaiky hametraka ny avonavony sy ny fitiavan-tenany anefa izy ireo, dimy minitra dia ho ampy hamahana ny toe-java-tsarotra."- EW, t. 119.
1. Ao amin'ny kilasy, mieritrereta fomba mahomby hahafahana mandresy ny fitiavan-tena. Ahoana no handraisan'ny tsirairay andraikitra mba hahafanteraka izany hevitra izany?
2. Tsy ratsy tsy akory ny hambom-po. Tian'Andriamanitra hahavita zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika isika. Mety hahatonga antsika ho resin'ny hambom-po anefa izany, ahoana no hialantsika amin'izany fandrika izany?
3. Mety tsy hampiseho hambom-po, fihatsarambelatsihy, fitiavan-tena na koa fialonana ny ankamaroantsika; fihetsika tsara no mety asehontsika ivelany. Tahaka ny fakan'ny hazo aravaha anefa, dia miafina ao ambanin'izay miseho ety ivelany ireo toetra ratsy ireo. Toy ny ahoana ny fiovan-toetran'ny olana tarihin'ny Fanahy Masina eo amin'ny fampiharana? Ahoana no handresentsika ny fakan'ny olantsika ka hahitantsika fitsaharana ao amin'i Jesôsy?
4. Saino bebe kokoa ny valinteninao tamin'ny fanontaniana farany ao amin'ny fizarana Alakamisy mikasika ny maha-zava-dehibe ny fiavin'i Kristy fanindroany. Inona rahateo moa ny fanantenana ao anatintsika raha tsy eo izany? Raha tsy hisy izany, inona ny soa ho nentin'ny fiavian'i Kristy voalohany, satria fantatsika fa ny maty dia hatory mandra-pahatongan'ny fitsanganana amin'ny maty, izay tsy hiseho raha tsy amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany?